Cabdixakiin Cabdullaahi Camey : Shirka Kismaayo ma ahan mid maslaxad u haya Ummada Soomaaliyeed | SAHAN ONLINE
Cabdixakiin Cabdullaahi Camey : Shirka Kismaayo ma ahan mid maslaxad u haya Ummada Soomaaliyeed
GAROOWE – Madaxweyne kuxigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Camey oo warbaahinta kula hadlay Garoowe ayaa kasoo horjeestay shirka Kismaayo ee dhawaan ku baaqay Madaxweynaha Jubbaland ,wuxuuna ku baaqay in shirkaas dib loo dhigo.
Cabdixakiin Cabdullaahi Camey ayaa sheegay in loo baahan yahay in shakiga laga qabo dowladda Federaalka laga baxo isla markaana wixii khilaaf ah ee jira laga wadahadalo.
Shirka Kismaayo ee Axmed Madoobe ku baaqay, shirkaas ra’yi ahaan ma ahan shir Masalaxad u haya Umadda Soomaaliyeed, waxaa ku talinayaa in shirkaas dib loo dhigo”ayuu yiri C/xakiin Camey.
Wuxuu sheegay in qaabka loo marayo shirkaas uu yahay mid khaldan isla markaana aysan jeclaysan doonin shacabka Soomaaliyeed,wuxuu tilmaamay in haddii ay jiraan waxyaabo lagaga cababnayo dowladda Federaalka in aan loo kala turjumin wixii jira si toos ah loo abaaro.
Xamar ayaa la isugu tagi jiray, awalna la tagi jiran, marinka loo marayo shirkaas waa marin qaldan, wixii khilaaf ee jira halaga wada hadlo, hadii ay jiraan wax lagaga cabanayo la inoo kala turjumi maayo anaga iyo dowladda Federaalka, waa inaynu si toos u abaarnaa, xamar la isugu tagaa, sida awal”ayuu yiri C/xakiin Camey.
Sidoo kale wuxuu ugu baaqay Madaxweynaha in uu qaato doorkiisa hoggaamineed isla markaana maamul kasta uu ugu tagaa deegaankiisa si khilaafka jira looga hadlo.
Hadalka Camey ayaa khilaafaya waraysi uu maalmo ka hor uu bixiyey Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas kaasoo uu kusoo dhaweeyey shirka uu ku baaqay Axmed Madoobe,kuna tilmaamay ra’yi wanaagsan in la isku yimaado wixii ka dhaxeeya dowlad goboleedyada ay kawada hadlaan.